Aung's Investment: 11/21/10 - 11/28/10
Stockတစ်ခုရဲ့ Open, High, Low, Close, Volumeအစရှိတာတွေသုံးပြီးတော့ Technical Analysisလုပ်တဲ့နေရာမှာ အဓိကအကျဆုံးဟာ ဘာလို့ထင်ပါသလည်း? Closing Priceဆိုရင် ထင်တာမှန်ပါတယ်။ တစ်နေကုန် ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ နောက်ဆုံးဘယ်လောက်နဲ့ပိတ်သွားသလည်းဟာ အရေးအကြီးဆုံးပါ။ OHLC, Volumeတွေသုံးတဲ့ Technical Analysisအများစုမှာ လူသိပ်သတိမထားမိတဲ့နောက်ထပ် Dimensionတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ အချိန်ပါပဲ။ Minute, Hourကစပြီး Daily, Weekly, Monthlyအစရှိသဖြင့် Linear Dimensionတစ်ခုဟာ X-axisပေါ်မှာရှိရပါမယ်။
ဒီPostမှာ Closing Priceတစ်ခုထဲကိုသုံးပြီး Stockတစ်ခုရဲ့ Major Supportနဲ့ Resistanceကို Analysisလုပ်တဲ့နည်းတစ်ခုကို ပြောပြပါမယ်။ အဲဒီ့Techniqueကို Point & Figure (P&F)လို့ခေါ်ပါတယ်။ အောက်မှာ Bank of America (BAC)ရဲ့ Chartကိုပြထားပါတယ်။
ဒီChartမှာ ထူးခြားတာကတော့ ဆွဲပုံဆွဲနည်းပါပဲ။ P&Fကိုဆွဲဖို့ Stockတစ်ခုဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ဘယ်လောက် ရွေ့လေ့ရှိသလည်းသိရပါမယ်။ ကိုယ်စောင့်ကြည့်နေကြStockဆိုရင် ဘယ်လောက်volatileဖြစ်လည်းဆိုတာ အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။ မသိရင်လည်း သိအောင်တိုင်းတာတဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှ ရေးသွားပါမယ်။ တစ်နေ့အတွင်း ရွေ့လေ့ရှိ့တဲ့Amountကိုသိပြီဆိုရင် အဲဒီ့Amountကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Multiplierတစ်ခုနဲ့ မြှောက်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော့် Personal Choiceကတော့ ၁.၅နဲ့ မြှောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ၁ဆခွဲပေါ့။ အဲဒီ့ Daily Range x 1.5 timesကို Box sizeလို့ခေါ်ပါမယ်။ Box sizeဟာ Chartထဲမှာမြင်နေရတဲ့ Crossတစ်ခုစီနဲ့ Circleတစ်ခုစီရဲ့ Amountကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ Crossဟာ ဈေးတက်တာဖြစ်ပြီး၊ Circleကတော့ ဈေးကျတာအတွက်ပါ။
BACတစ်နေ့ကို ပြား၄၀လောက် Rangeသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Box sizeဟာ 40c x 1.5 = 60c ပါ။ ဒီတော့ BAC P&F chartမှာ Cross/Circleတစ်ခုစီဟာ ပြား၆၀ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ CrossကနေCircle, Circleကနေ Crossပြန်ဖြစ်အစရှိသဖြင့် ပုံထဲမှာ Crossနဲ့ Circleတွေဟာ တစ်Columnစီအလှည့်ကျသွားနေတာကိုလည်း တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို Column / Symbol ပြောင်းသွားတာကို Reversal ဖြစ်တယ်လို့ ခေါ်ပါမယ်။ Stockဈေး တက်ရာကနေကျ၊ ကျရာကနေတက် အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ Reversal လုပ်ဖို့ reversal box amountကို ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ Rule of Thumbကတော့3boxesပါ။ ဒီ Chartမှာဆိုရင် each box size 60c x3= 180cပေါ့။ ဒီတော့ BAC ၁ကျပ်ပြား၈၀ဈေးမကျ/မတက်မချင်း Symbolမပြောင်းပါဘူး။
Cross/Circleတစ်ခုချင်းစီ တက်ဖို့/ဆင်းဖို့အတွက် Stock priceဟာ box sizeလောက်အနည်းဆုံးရွေ့ရပါမယ်။ မရွေ့ရင်ကောဆိုရင် ဘာမှအသစ်ထည့်ဆွဲဖို့မလိုဘူးပေါ့။ Reversal amountလောက် Violentဖြစ်ပြီဆိုရင် Trendပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ Symbolကို Switchလုပ်ရပါမယ်၊ တခါတည်းလည်း Reversal amountအတိုင်3းboxဆိုရင် 3ခု၊4boxဆိုရင်လည်း 4ခု ဆွဲရပါမယ်။
နောက်တစ်ခုသတိပြုရမှာက အချိန်X-axisပါ။ အချိန်ဟာ Linear Scaleမရှိတော့တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ Box size amountတစ်ခုစာစီ Closing Priceအပြောင်းအလဲရှိမှ Chartကို Updateလုပ်တာမို့လို့ပါ။ Alphabet initialsလေးတွေနဲ့ ဂဏန်းလေးတွေဟာ လတွေရဲ့ အစစာလုံးနဲ့ ခုနှစ်၊ အရေးကြီးတဲ့Reversalရက်တွေကို Compressedလုပ်ထားပြီး ပြနေတာပါ။ P&Fကို လက်နဲ့ပဲဆွဲမယ်ဆိုရင် တော်တော်လေး အချိန်ကုန်ပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Metastockဆိုတဲ့ Softwareနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ Box sizeနဲ့ Reversal amountကို Inputထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ P&Fဟာ အချိန်ကို လွယ်လွယ်လေးကျုံ့နိုင်တာမို့ နှစ်များများDataရှိလေ P&Fဟာ လှလေ၊ အသုံးဝင်လေပါပဲ။ BACအတွက် ကျွန်တော် ၂၀၀၅ခုနှစ်ကတည်းက Dataနဲ့ဆွဲပြထားတာပါ။
P&Fရဲ့ အဓိက အသုံးဝင်ပုံကတော့ Circleများများတန်းနေတဲ့ Reversalဖြစ်တဲ့နေရာဟာ Major Supportတွေလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ Crossတွေများများတန်းနေတဲ့နေရာကတော့ Major Resistanceလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ BAC Chartထဲမှာ အစိမ်းရောင်လိုင်းတွေဟာ Major Supportနေရာတွေပါ။ P&Fကနေ Stockတစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်ကြာအောင် ဈေးကျနေခဲ့လည်း၊ ဈေးတက်နေခဲ့လည်း လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်ပါတယ်။
Box size = Average daily movement range ofastock price x multiplier (multiplier is personal choice and mine is 1.5) ဘာလို့ ၁.၅သုံးလည်းဆိုတော့ Daily Rangeထက် နည်းနည်းပိုတဲ့ Price actionတွေကိုပဲ Captureလုပ်ချင်လို့ပါ။
Reversal boxes =3or4times of Box size(again, it's personal choice)
Time scale is no longer linear on X-axis
Mainly used to identify long term major support and resistance. Resistanceအတွက် Cross (X)တွေရဲ့ အပေါ်ဘက်ကို ဆက်ဆွဲပါ။ Supportအတွက် Circle(O)တွေရဲ့ အောက်ဘက်ထိပ်ကို ဆက်ဆွဲပါ။
Better to use charting software help to draw P&F
P&Fရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်ကတော့ အချိန်ပါပဲ။ ဘယ်အချိန်မှ Major resistance/supportတစ်ခုကို ပြန်ထိမလည်းဆိုတာ P&Fသုံးပြီးမှန်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။
P&Fကို ကျွန်တော်သုံးလေ့ရှိတာကတော့ Priceဟာ Major resistance/supportနား ရောက်နေပြီလားဆိုတာကို Verifyလုပ်ဖို့ပါပဲ။
P&Fချည်းပဲသုံးဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ တခြား Technical Analysisနည်းတွေနဲ့ တွဲသုံးသင့်ပါတယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 11/24/2010 07:42:00 PM0comments
Labels: methods, Point and Figure, resistance, reversal, support, technical analysis
Stop-lossအကြောင်းပြောရင် Technical Analysisကို ဘယ်လိုမှ ချန်ထားလို့မရပါဘူး။ Long-term Fundamental based investorတွေတောင်မှ Technical Analysisကို သုံးမယ်ဆိုရင် Stockတစ်ခုကို Investလုပ်တဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဖတ်ရတာလွယ်ကူအောင် Shortingလုပ်တာကို ဘေးဖယ်ထားပြီး Simply Long Stock(ဈေးတက်လျင် အမြတ်ရခြင်း)ဘက်ကနေပဲ ပြောသွားပါ့မယ်။
Oldest and Simplest are the Best
Technical Analysisရဲ့ ရှေးအကျဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး Trend line, Support, Resistanceလိုင်းတွေဟာ Stop-loss, Profit-taking pointတွေ Defineလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးနည်းတွေပါပဲ။ ကျွန်တော်အဲဒါတွေအကြောင်း အသေးစိပ်ရေးဖူးပါတယ်။ Stockတစ်ခုကို မTradeခင် အရေးအကြီးဆုံးသိရမှာတွေက
Profit is made at the Entry, not at the Exit (ဘယ်ဈေးကဝင်မလည်းဆိုတာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်)။
အနီးဆုံး Supportနားကို Stockကျလာတဲ့အထိစောင့်ပါ။ စောင့်ရလို့ ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး။ Cashဟာ အနည်းဆုံးတော့ Cash interestsရနေမှာပါပဲ။
Supportကို ထိပြီဆိုရင် နှစ်ရက်၊ သုံးရက်လောက်Closeတွေဟာ Supportအပေါ်မှာ ပိတ်သလားကြည့်ရပါမယ်။ ဈေးတက်ပြီးပိတ်သွားတဲ့နေ့မှာ Volumeကောင်းလားလည်း ကြည့်ရပါမယ်။
Tradeတစ်ခု Openမလုပ်ခင်မှာ Supportအောက်နားမနီးမဝေးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Stop-lossလို့ သိထားရပါမယ်။ Tradeတစ်ခုကို မဝင်ခင် ဒီဈေးအထိကျလာရင် Cut Lossလုပ်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရပါမယ်။
အဲဒီ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှ Tradeတစ်ခုကို သေချာOpenလုပ်ပါ။
နည်းနည်းထပ်ကွန့်ချင်ရင် Nearest Resistanceလိုင်းဟာ ကိုယ်Profit-takingလုပ်သင့်တဲ့ နေရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းဟာ လှေနံဓါးထစ်မှတ်ထားလို့တော့မရပါဘူး။ သတင်းဆိုးတစ်ခုခုထွက်လာခဲ့ရင် အဲဒီ့Resistanceကို ထိမှာကို မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပြီးရင် ကိုယ်Tradeလုပ်မယ့် Intervalပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ပြည့်တဲ့အထိ ဘာမှဖြစ်မလာတော့လည်း ရသလောက်နဲ့ Exitလုပ်သင့်ရင် လုပ်ရမှာပါပဲ။ Uptrendကို Clearly Brokenဖြစ်နေတဲ့ Signပြနေရင်လည်း မြန်မြန်ပိတ်ရမှာပါပဲ။
ပထမဆုံးနားလည်ဖို့က အပေါ်မှာပြောသွားတဲ့ Technical Analysisဟာ ကိုယ့်ရဲ့ trading riskကို အနည်းဆုံးလျော့ချနိုင်ဖို့ပဲ သုံးစားလို့ရတယ်လို့ နားလည်ရပါမယ်။ ကိုယ်ဝင်တဲ့Entryဟာ Chartပေါ်မှာ လှလှလေးပေါ်နေပေမယ့် ဒါဟာProfitable Tradeဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျိန်းသေပြောလို့မရပါဘူး။ တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က မင်းကိုငါ သေချာမြတ်မယ့် Technical Analysisတစ်မျိုးသင်ပေးမယ်ဆိုရင် too good to be trueလို့ သဘောပေါက်ရပါမယ်။
Gambler and Lotto Player
အပျော်တမ်းလောင်းကစားတတ်တဲ့သူ၊ ထီထိုးပြီး စိတ်ကူးကောင်းကောင်းယဉ်တတ်တဲ့သူတွေဟာ Stock Tradingဝင်လုပ်ရင် ဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်နိုင်ပါတယ်။ ထီထိုးပြီး စိတ်ကူးယဉ်တတ်တဲ့ Mindsetဟာ Traderတစ်ယောက်ကို Realistic decisionချဖို့ ကောင်းကောင်းနှောင့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးက တစ်ချို့လောင်းကစားနည်းတွေနဲ့ ထီထိုးရင် ဘာလုပ်လို့ မရဘူးလည်း သိသလားမသိဘူး။ တွေးကြည့်ပါဦး။
အဖြေကတော့ You can't stop-loss! ထီထိုးပြီးသွားရင် ဘွာတေးလုပ်လို့ရသေးလား? ကိုယ့်ပိုက်ဆံကတော့ အဆုံးပဲ။ ထီပေါက်ဖို့Probabilityက 1 inaseveral millions။ ထီထိုးပြီး ထိုင်စောင့်တတ်တဲ့အကျင့်ဟာ ထီအပျော်ထိုးတဲ့ကိစ္စမှာ ပိုက်ဆံဘာမှမများပေမယ့် အဲဒီ့Mindsetကို Tradingထဲကို သယ်လာရင် You're as good as dead! နောက်တနည်းတွေးလို့ရတာကတော့ Stop-lossမရှိရင်၊ မလိုက်နာရင် ဒါဟာ လောင်းကစားနေတာလို့ပဲ မြင်ရပါမယ်။
Can't bear the feeling of losing money
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဆိုးဆုံးပဲ။ ပိုက်ဆံဆိုတာ ကိုယ့်အိတ်ထဲကနေ တတိတိနဲ့ထွက်နေရင် ဘယ်လိုလုပ် စိတ်ကောင်းနိုင်မှာလည်း။ မရောင်းသေးသရွေ့တော့ တကယ်မရှုံးသေးဘူး (Realised Loss)ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီ့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံလေးပြန်ရနိုး၊ ပြန်ရနိုးနဲ့စောင့်တဲ့အလုပ်ဟာ Tradingမှာ အဆိုးရွားဆုံးပဲ။ အဲဒီလို Bad Feelingမခံစားရအောင်က ကိုယ့်ရဲ့Perspectiveကို ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။
Think likeabusiness man
အခုဒီPostဖတ်နေတဲ့သူဟာ Businessတစ်ခုမှာ Employeeအနေနဲ့ လုပ်နေဖို့က တော်တော်လေးProbabilityများမှာပါ။ ကိုယ့်တစ်လတစ်လရရနေတဲ့ လခကအဲဒီ့ Businessရဲ့ Incomeဘက်မှာရှိသလား၊ Expenseဘက်မှာရှိသလား?? ရှင်းပါတယ်၊ ကိုယ်ရမှတော့ Expenseပေါ့။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုခန့်ထားတဲ့ အလုပ်ရှင်ဟာ ကိုယ့်ကိုလခပေးသလောက်မှ အနည်းဆုံးပြန်အမြတ်မရရင် ကိုယ့်ကိုခန့်ထားပါ့မလား။ No way unless it's your daddy's business. အလုပ်မှာ ကိုယ်ဟာContribution သိပ်မလုပ်နိုင်တော့ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ Employerရဲ့ Businessဟာ သိပ်မစွံတော့ရင်ဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးမှာ ဘာလုပ်ခံရမလည်း? The famous "L" wordလေ - Layoff!
ဒီတော့တွေးရမှာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို Business Ownerလိုသဘောထားပြီး Lossတွေဟာ ကိုယ့်Businessရဲ့ Expensesတွေပဲလို့ နားလည်ရပါမယ်။ Profitတွေကတော့ Revenue/Incomeပေါ့။ ဒီတော့ Stop-lossမလုပ်ဘဲ Traderဖြစ်ချင်တဲ့သူဟာ Expenseမရှိတဲ့ Businessကို Runချင်နေတဲ့သူနဲ့အတူတူပဲလို့ နားလည်ရပါမယ်။ Tradeတစ်ခုဟာ ကိုယ်ထင်သလိုဖြစ်မလာရင် အသုံးမကျတဲ့အလုပ်သမားကို ထုတ်ပစ်သလို အဲဒီ့Tradeကို Sackလုပ်ပစ်ရပါမယ်။ Technical Analysisကိုသုံးပြီး Analysisလုပ်တာဟာ ကိုယ်ခန့်မယ့် အလုပ်သမားရဲ့ Resumeကို ကြည့်သလိုပဲလို့ သဘောပေါက်ရမယ်။ သဘောကျလို့ ခန့်ပြီးတိုင်း တကယ်သုံးစားလို့ ရချင်မှရမှာပေါ့၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဒီတော့ အသုံးမကျတဲ့အလုပ်သမားကို ဖြုတ်ပစ်နိုင်ရင် Professional traderဖြစ်ဖို့ နီးစပ်လာပြီလို့မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Stop-lossကို ဒီpostမှာ Method and Mindsetပိုင်းဘက်တွေကနေ ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်Postတွေမှာ Detailed Money Managementအပိုင်းတွေ ရေးပေးသွားပါဦးမယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 11/22/2010 12:59:00 PM0comments
Labels: Management, Mindset, stop-loss